Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Neymar Child Story Plus Ihe Ntughari Ihe Ozo
Akụkọ ndụ anyị Neymar na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata, akụkọ mmalite ya, ndị nne na nna, ezinaụlọ, ụmụ nwanyị, nwatakịrị, ndụ onwe onye, ​​ụdị ndụ ya na uru ya.
Na nkenke, anyị na-egosipụta Full Life History of Neymar, ndị egwuregwu bọọlụ mere aha na obodo ya na klọb. Bodị ndụ Lifebogger nke akụkọ akụkọ Neymar malitere site n'oge ọ bụ nwata mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama na egwuregwu ahụ.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị na-akpali mmasị na ọdịdị nke Neymar's Biography, lee ndụ nwata ya na mbili gallery. I kwenye na m na achikota Bio ya.
Ihe omuma nke Neymar. Lee ndụ nwata ya na mbili ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere nka ya na njiri mara ya na Ballon d'Or. Maka nke a, ọtụtụ ndị ọkachamara n’egwuregwu bọọlụ na-ele ya anya dịka otu n’ime ndị kachasị egwu n’uwa.
N'agbanyeghị otuto ndị enwetara kemgbe ọtụtụ afọ, anyị ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-agba bọl agbaze agbachala Biography zuru oke nke Neymar.
Maka nke a, Lifebogger azala oku doro anya iji kọọ akụkọ ndụ ya. Ugbu a na-ebutụbeghị ya, ka anyị bido n’ihe ndị mere tupu amụọ ya na mgbe ọ bụ nwata.
Akụkọ banyere nwata nke Neymar:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza nicknames atọ; Juninho, Joia, na Chineke nke Abali.
A mụrụ Neymar da Silva Santos Júnior na 5th ụbọchị nke February 1992 na nne ya, Nadine Goncalves na nna, Neymar Santos Sr. Ebe amụrụ ya bụ Mogi das Cruzes, na mpụga nke steeti São Paulo, Brazil.
Ndụ siri ike maka nna ya Neymar Sr na nwunye ya Nadine tupu amụọ ya n'ihi obere ego.
Ị maara?… Mgbe mama Neymar dị ime, ezinụlọ enweghị ike ị nweta nyocha ultrasound iji lelee mmepe nwa ha. Obi dị m ụtọ na ọ nwere obi ụtọ na obi.
Neymar bịara n'ụwa dị ka nwa mbụ na nwa n'ime ụmụ abụọ (ya onwe ya na Rafaella Santos), amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya.
O ketara aha ya n'aka nna ya, onye na -ebu Neymar Senior. Aha ahụ (Jnr) mara nwa ya nwoke na nna ya.
Akụkọ mberede Neymar:
Maka ọtụtụ ndị na-amaghị, Junior gaara anwụ mgbe ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ otu afọ. Eziokwu ka ekwuru, ụwa bọọlụ agaghị ama na ọ dịbu. Ugbu a, lee akụkọ a dum.
Mgbe ọ dị obere nke ọnwa anọ, Neymar rụrụ ọrụ ebube lanarịrị ihe mberede ụgbọ ala na-egbu egbu. Ihe kpatara ihe mberede ahụ bụ ụgbọ na-abịa nke na-enweghị nlezianya gbapụrụ n'ugwu dị larịị.
Onye ọkwọ ụgbọ ala a ma ama ejighị ụkwụ ya, tụgharịa ya na ụgbọ ala ezinụlọ Neymar, na -emegbu ha nke ukwuu - n'ihe akpọrọ nnukwu ihe ọghọm.
Ihe nwute a mere mgbe Mr Santos na Nadine na -aga ileta ụfọdụ ndị ikwu ha.
Akụkọ mberede Neymar.
Ihe ọghọm ahụ mere ụbọchị mmiri ozuzo, na papa Neymar amaghị na ụgbọ ala na-abịa ọsọ ọsọ na ezinụlọ ya. Dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ahụmahụ, ọ gbalịrị ịgbada n'aka ekpe mana oge agaala.
Neymar merụrụ ahụ nke ukwuu ka ọbara kpuchiri ahụ ya niile. Obi dị m ụtọ na ọkpụkpụ ya adịghị agbaji.
Agbanyeghị, ụkwụ aka ekpe nke nna ya nwere nnukwu ihe mmerụ ahụ - ebe ọ gbawara ọkpụkpụ hip ya. Na ozugbo ahụ, Neymar Snr chere na ọ ga -anwụ.
Mmeghachi omume nke nna Neymar na ihe mberede ahụ:
N'ịkọ akụkọ banyere ihe mberede ahụ, nna Neymar gwara ndị mgbasa ozi;
MGBE MGBE MGBE NA NSỌ, M gwara nwunye m, 'NADINE, M na-anwụ'. Ihe niile mere nnọọ ngwa ngwa, E nwekwara ọtụtụ ọgba aghara.
Ihe na-echegbu Neymar Snr kachasị abụghị mmerụ ahụ ya kama ọ bụ ọnọdụ nke naanị nwa ọ mụrụ - Neymar Jr. N'agabiga ihe mgbu ọ na-enwe na ọkpụkpụ agbaji agbaji ya, nwoke ahụ nwere obi mgbawa tiri mkpu, na mmetụta nke oke egwu ya. N'okwu ya;
ELEE NWA M?
O leghaara anya nke ukwuu ma ọ hụghị Neymar - na-eche na ihe mberede ahụ tụpụrụ ya n'ụgbọ ala. Maka nwa obere oge, Neymar Snr chere na ọ funahụ ya. N’iburu nke ahụ n’uche, ọ rịọrọ Chineke ka o gbuo ya kama ịkpọrọ nwa ya.
Akụkọ mberede Neymar - Enyemaka na Ikpeazụ:
Nadine (Neymar's mum) ga-arịgo n'ụgbọala ahụ site na windo azụ mebiri emebi ebe oche oche ka na-ejide di ya.
Dika ihu oma si di, Chukwu zara ekpere ndi ezin’ulo dika ndi mmadu gbabatara izoputa. Ha buru ụzọ dọkpụrụ Neymar Snr n’okpuru oche nke ụgbọ ala ya.
Nwa Neymar nọ n'ọnọdụ nwute. Ọbara gbara ahụ ya niile n'oge ha bugara ya ụlọọgwụ.
Nwatakịrị nwoke ahụ bepụrụ isi ya n'ihi mpekere iko dị n'ime ụgbọ ala ahụ. Obi dị m ụtọ na ezinụlọ ahụ gbakere n'ihe ọjọọ a merenụ.
Neymar Na-etolite Afọ:
Mgbe ị lere anya n'egwuregwu bọọlụ taa, ọ na-esiri ike ikwere na ụdị ọdachi a dakwasịrị ya n'oge ọ bụ nwata.
Afọ atọ mgbe ihe mberede ahụ gasịrị, ezinụlọ Neymar nabatara otu nwatakịrị nwanyị. N'okpuru ebe a, onye na-acha ọkụ ọkụ na-etolite na nwanne ya nwanyị, onye aha ya bụ Rafaella Santos.
Neymar nọrọ nwata ya na Rafaella Santos, nwanne ya nwanyị.
Neymar nwere àgwà bụ isi nke naanị otu nwa tupu a mụọ nwanne ya nwanyị. Ọ bụ ụdị - na-enyere ndị mụrụ ya aka mgbe niile. Neymar na-ebute ihu a dị oke njọ mgbe ọ na-enyere Nadine, nne ya aka, na kichin.
Neymar dị ka nwatakịrị. A na-ese ya na-enyere mama ya aka, na-eji mposi, na-agba ballon.
Ka ọ na-etolite na nwanne ya nwanyị Rafaella, nwatakịrị ahụ bịara bụrụ onye na-enweghị nlezianya na onye ọhụụ. Dika nwatakiri, o bidoro igosi ihe iriba ama mbu ya na ngosiputa nke akara aka ya. Nke a pụtara ìhè site n'ụzọ ọ na-esi akụ ihe dịka bọọlụ ya kacha amasị.
Ọnọdụ Ezinụlọ Neymar:
A mụrụ onye ọkpọ ahụ na-egbuke egbuke n'ime ezinụlọ dị umeala n'obi. Ọ si n'ezinụlọ football, nke egwuregwu ahụ enweghị mmasị na ya. N'okwu dị mfe, ezinụlọ ya enweghị obi ụtọ ma ghara ime ya na football.
You maara?'S papa Neymar bụbu onye na-agba ọsọ na-amakarị onye na-egwuri egwu na bọọlụ kacha nta na Brazil. Ya mere, ọ dabara na ọrụ ya enweghị ihe ọ bụla ọ ga-ede n'ụlọ. Nke a bụ otú o si dị ka n'oge ya.
Nna Neymar na-egwu egwuregwu abụghị ihe ọ ga-ede n'ụlọ.
O di nwute, ihe ojoo ojoo Neymar Snr nwetara mere ka okpukpu agbaji ya. Nke a kpatara mmerụ ahụ jụrụ ịgwọ. N'ihi nke a, a manyere Neymar Snr ịhapụ ọrụ football ya.
Mkpebi ịla ezumike nká n'oge egwuregwu ji aka ya pụta. Nke ahụ dugara nnukwu nsogbu nye ezinụlọ Neymar wee mee ka papa ya bụrụ ogbenye.
Ka oge na-aga, ihe bịara ka njọ na Mr Santos enweghị ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọkụ maka ụlọ ya. N'ihi nke a, Neymar na mama ya dara ogbenye na-ejikarị kandụl.
N'otu oge, ezinụlọ dum - ugbu a na mgbakwunye nke nwatakịrị ikpeazụ, Rafaella - enweghị nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị ịhapụ ụlọ. Ha niile kwagara n'ụlọ nne na nna ochie Neymar.
Mgbe ha bi ebe ahụ, a manyere papa Neymar, mama ya, ya na Rafaella ka ha banye n'otu ọnụ ụlọ. Dịka ụzọ ijikwa, ha kesara otu akwa.
Nsogbu ego siri ike mere ezinụlọ Neymar biri n'ụlọ nne nne ya. Ha nile dinara n’otu akwa ụra.
Iji kwado ma mee ka ezinụlọ ya nwee olileanya, Nna Neymar malitere ịrụ ọtụtụ ọrụ.
Ọ rụrụ ọrụ dịka onye ọrụ, igwe na onye na -ere ahịa - n'aha niile ka ọ gbakee n'ihe isi ike ego. Ọrụ siri ike wetaara ezinụlọ ụfọdụ nkasi obi mana ejighị n'aka na ọ dịghị nfe na ahụike nwoke ahụ.
Mgbe ezinụlọ Neymar bi n'ụlọ nne na nna ya ochie, ha nwere ike iji ọkụ eletrik kama ọkụ ọkụ kandụl. Ubon oro ama enen̄ede ọfọn ama, ndien mmọ ẹkesụk ẹkop inemesịt ke adan̄aemi mmọ ẹkesụk ẹdude do.
Neymar na Rafaella nwere obi ụtọ ịnọ n'ụlọ Granny. Ma, ị ga-ahụli ịmụmụ ọnụ ọchị nke ndị mụrụ ya. Ọ bụ ihe ịrịba ama nke ihe ha na-agabiga n’oge ahụ.
Ebe Ezinaụlọ Neymar:
O di nwute, amuru onye Brazil na obodo ndi dara ogbenye. Mogi das Cruzes bụ obodo dị larịị nke dị naanị elekere na nkeji site na Sao Paulo.
Dika edere ya na eserese, nke a bu obodo ezoro ezo nke di na mpụga nke obodo etiti.
N'oge a gbara ajụjụ ọnụ na akwụkwọ akụkọ mba Britain kwa ụbọchị (Mirror), nna Neymar zoro aka na obodo amụrụ nwa ya dị ka ebe mkpofu Sao Paulo.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ebe obodo kachasị nwee obodo Brazil (São Paulo) tụbara nsị ya niile.
Ezinụlọ ezinụlọ Neymar bụ Mogi das Cruzes. A maara obodo ahụ dịka ebe mkpofu nke Sao Paulo.
N'oge ahụ, ezinụlọ Neymar bi na mpaghara agbata obi na-adịghị mma. Mogi das Cruzes ruo taa ka bụ ebe dị egwu nke ejiri ọgwụ ọjọọ, ịda ogbenye na nnukwu mpụ.
Site na nke a, ọ na-achịkọta eziokwu ahụ bụ na ndụ Neymar bụ ọgụ site na mbido. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ezinụlọ ya amaliteghị na efu. Ha bidoro na nkeji ise.
N'ihi ya, mgbe onye Brazil na-acha ọkụ ọkụ na-agụ akwụkwọ, ọ debara aha ya na usoro agụmakwụkwọ nke ga-adabara ya na ndị agbụrụ ya.
Ná mmalite, ọ ga -ejikọ mmasị ya na bọl na ụlọ akwụkwọ. Enweghị ihe ọ bụla ga -ewepụ bọọlụ n'aka nwata mgbe ọmụmụ gachara.
N'oge ahụ, ọ bụrụ na ahụghị Neymar bọọlụ ya, a ga -ahụ ya ka ọ na -egwu egwuregwu vidiyo.
N'oge ahụ, n'ụlọ mgbe ụlọ akwụkwọ gasịrị, nne na nna ya enweghị ike ị nweta ọkụ eletrik, yabụ na ọ nwere ike iji ọkụ gụọ akwụkwọ ya.
Dịka edere na mbụ, mmepe a mere ka ezinụlọ jiri kandụl dị ka naanị isi mmalite maka ọmụmụ ya.
Kaosinadị, n'oge ụfọdụ, ihe bịara ka mma, ọchịchọ ịghọ ọkachamara wee weghara agụmakwụkwọ ya.
Neymar Football Akụkọ:
Dịka nwatakịrị, ọ chọrọ ịbụ ihe niile - site na Batman ka Superman, na mgbe ahụ, Power Rangers. Neymar dị nnọọ oke omume.
N'ime ihe omume ntụrụndụ nwata ọ bụla, Football ghọrọ onye a kacha hụ n'anya. Nna Neymar ghọtara na nwa ya nwoke nwere ezigbo onyinye mgbe ọ dị obere ma kpebie inyere ya aka ịchụso nrọ ya.
Ihe mbu mbu, o kwere ya ka o tinye futsal na football football. Mgbe ọ dị afọ isii, Neymar malitere igwu futsal. Egwuregwu egwuregwu bọọlụ siri ike ghọrọ nnukwu mmetụta n'ahụ ya mgbe ọ na-etolite.
Futsal nyeere Neymar aka ịzụlite usoro ya, ikike ịmegharị na oghere siri ike na ọsọ nke echiche.
Iji nweta ohere maka asọmpi futsal na-asọ asọmpi, ndị nne na nna Neymar nwetara ego iji nweta mbugharị.
N'ime afọ 1999, ezinụlọ ahụ kwagara ihe karịrị 100 kilomita site na Mogi das Cruzes (ebe a mụrụ Neymar) gaa São Vicente.
Mgbe ha bi n'obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri dị na ndịda São Paulo, ha hụrụ otu egwuregwu Futsal na-asọ asọ nke ukwuu aha ya bụ Portuguesa Santista. Neymar gafere ọnwụnwa ha ma tinye ha n'ọkwá ndị ntorobịa Futsal.
Mgbe ha kiriri ka ọ na -egwu egwu na nke mbụ, ndị egwu nwere obi ụtọ na nka nka, flair, na okike ya. A na -akpọ Neymar ngwa ngwa "ihe ụmụaka".
Nwatakịrị nwoke a bụ ụdị onye ji ụdị aghụghọ ya na ihe egwu ya tie ndị na -egwu egwuregwu buru ibu ma tookwa ya.
Akụkọ Neymar Futsal.
Enweghị onye ọ bụla na-asọmpi, Neymar ghọrọ nwa kachasị mma na agụmakwụkwọ niile. A na-enwe obi ụtọ mgbe niile maka inwe oke ntụkwasị obi, aghụghọ na bọl, iji feints na ikike ịme nnukwu ihe na oghere.
Nke a bụ vidiyo nke ụbọchị Neymar Futsal - nke gosipụtara etu o si dị mma.
Ihe omuma nke Neymar - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
N'afọ 2003, afọ ise ka ha sonyere Portuguesa Santista, ezinụlọ Neymar nwetara ọkpụkpọ nrọ ha. Santos FC, otu n'ime klọb kachasị ukwuu na mba ahụ, nyere kpakpando na -ebili nkwekọrịta.
Neymar afọ ndị mbụ na Santos FC agụmakwụkwọ ..
N'afọ ahụ, nne na nna ya kwagara Santos, otu n'ime State nke São Paulo, Brazil. Nkwekorita a na-akwụ ụgwọ site na klọb gbanwere ọnọdụ ego nke ezinụlọ Neymar.
Na ego ndị ọzọ, ezinụlọ ya zụtara ala mbụ ha, ụlọ dị ezigbo nso na Vila Belmiro, nke bụ ụlọ egwuregwu Santos FC. Ha na-agọzi nwa ha nwoke mgbe niile maka inyere ezinụlọ ha aka ịda ogbenye.
Ndị nne na nna Neymar na-enye ya ngọzi ha maka ime ka ezinụlọ ha pụọ ​​na ịda ogbenye.
Ọnwụnwa Real Madrid nke Neymar:
Mgbe ya na Alvinegro na-egwu egwu, Neymar gosipụtara ọfụma football karịa mmadụ niile nọ n'ọkwa ya.
Mgbe ọ dị afọ 14, aha ya amaala ama n'etiti ndị European scouts ndị bidoro ịlụ ọgụ maka mbinye aka ya.
N’afọ 2006, Neymar nwetara ọkpụkpọ oku izizi ya na Europe maka ule ụlọ akwụkwọ Madrid. Ya, ya na nna ya, gara Spain maka idozi ego na Los Blancos.
N'oge ahụ, Real Madrid nwere nnukwu aha dị ka Ronaldo, Robinho, Zidine Zidane, Roberto Carlos na David Beckham.
Akụkọ banyere ikpe Neymar Real Madrid.
Mgbe ọtụtụ mkparịta ụka gasịrị, mkparịta ụka mbufe dara. Obi adịghị papa papa Neymar ụtọ maka ihe Real Madrid nyere ya. N'oge a, o kpebiri na nwa ya nwoke na-eto eto ga-aga n'ihu na Santos.
Ga n'ihu na-ebili na Santos Academy:
Iji tụọ egwu klọb ndị mba ọzọ ịpụ ya, Santos mụbara ego Neymar na -enweta site na 10,000 ruo 125,000 reais kwa ọnwa.
Ọ kwụghachiri okwukwe etinyere na ya site na igosi ngosipụta egwuregwu bọọlụ ya na -enweghị atụ - karịa onye ọ bụla nọ n'ọkwa ya.
Dika edere ya na vidiyo di n'okpuru, enweghi ihe njedebe Neymar da Silva Santos Júnior enweghi ike ime. O nwetara ịrị elu meteoric n'oge afọ ya na agụmakwụkwọ Santos.
Na-esochi mmemme agụmakwụkwọ Santos nke Neymar, akpọrọ ya ka ọ nọchite anya ndị otu egwuregwu bọọlụ Brazil n'okpuru-17. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ ghọrọ ezigbo enyi Philippe Coutinho.
Ihe omuma nke Neymar - Ihe omuma nke oma na akwukwo:
Mgbe ọ dị afọ 17, e buliri ya na Santos FC nke mbụ mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya.
Dị ka onye agadi Alvinegro Praiano, Neymar ghọrọ onye na-eme ihe nkiri zuru ụwa ọnụ. Ọ bụ onye ọtụtụ ndị klọb na Europe rọrọ ka ha nwee otu.
Na mgbakwunye na inyere Brazil aka inwe mmeri na 2011 South American Youth Championship, Neymar meriekwa iko South America niile maka ijide.
Ha gụnyere Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Copa do Brasil na Recopa Sudamericana.
Neymar's Santos trophies.
FC Barcelona Storyga nke Ọma Akụkọ:
N'ihe dị ka Mee 2013, o mechara mee ka ọ gbanwee na Spanish. Ọ bụ njem a na-ewere dị ka otu n'ime mbupụ kachasị ukwuu na South America na South America. Site na mbufe ahụ, ndụ ezinụlọ Neymar gbanwere ruo mgbe ebighị ebi.
Igwe na-egbuke egbuke nke na-egbuke egbuke ghọrọ akụkụ nke ndị na-awakpo Barcelona nke nwere Lionel Messi na Luis Suárez. Dika umunne, ndi South America a nyeere Blaugrana aka iweta aha nile di njide.
Ha gụnyere Njikọ Njikọ, La Liga, Copa del Rey, UFEA Super Sup, Supercopa de España na FIFA Club World Cup.
Neymar na Barcelona.
Me aha maka Brazil:
Na mgbakwunye na ihe ịga nke ọma na ọkwa klọb, Neymar kwụghachiri ụgwọ ekele ya maka ala nna ya.
Gị ntinye ya na 2014 FIFA World Cup na 2015 Copa América nwere mmerụ ahụ, ọ ka pụtara ike n'afọ na -esote.
Ndị Brazil nwere ekele n'ezie maka Neymar ka o nyeere ha aka imeri asọmpi ndị ntorobịa South America. Ọ kwụsịghị ebe ahụ.
Neymar, n'akụkụ kpakpando dịka Gabriel Jesus na Filip Anderson wdg, nyere obodo ama ama nke 2016 Summer Olympics.
Neymar nke Brazil.
PSG Successga nke Ọma Akụkọ:
Gburugburu August 2017, Barcelona na njikwa Neymar, nke nna ya na -edu, mere ihe a na -apụghị ichetụ n'echiche na mkparịta ụka football.
Ha mebiri nkwekọrịta ruru nde 222 XNUMX nke mere ka Neymar kwaga Paris Saint-Germain nke ọma. Nnyefe ahụ mere ya otu n'ime Ndị na-egwu bọl na-akwụ ụgwọ kachasị elu n'ụwa.
Na France, Neymar, tinyere aha ndị ọzọ - nke dị ka Kylian Mbappe na Edinson Cavani wdg, nyeere PSG aka imeri treble ime ụlọ na anọ.
Ọ kwụsịghị ebe ahụ. Ọmarịcha ya dugara klọb ahụ na Final Champions League nke mbụ ha.
Neymar na PSG trophies.
N'oge a na-emelite Neymar's Biography, a na-akpọ ya onye egwuregwu kachasị ahịa n'ụwa. Ọzọkwa, ya, n'akụkụ akụkọ akụkọ Brazil Pele na mbubreyo Diego Maradona, nke a họọrọ otu n’ime mmadụ 100 kasị nwee mmetụta na mbara ụwa.
Obi abụọ adịghị ya, Neymar na-anọchite anya nnukwu usoro nhazi ọ bụghị naanị na egwuregwu ụwa kama egwuregwu n'ozuzu. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, banyere Bio ya, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Ihe omuma nke ndu ndu Neymar:
Onye ọ bụla maara na ọ bụ onye ama ama na Brazil. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara ọtụtụ enyi nwanyị Neymar dere. Otu ihe bụ eziokwu.
N'ime afọ ndị gafeworonụ, onye na -agba ama ama ama ama ama ama ama ama dị ka nwanyị na -eme ihe nkiri. Akụkụ a na -eburu gị mmekọrịta ya gara aga na nke ugbu a.
Akụkọ ịhụnanya nke Neymar na Carolina Dantas:
Ha abụọ malitere ịlụ n'afọ 2010 mgbe onye Brazil bụ naanị 18. Ọnwa ole na ole ka mmekọrịta ha gasịrị, Carolina Dantas tụụrụ ime.
N'afọ 2011, kpomkwem na 13th nke Ọgọst, ọ mụrụ nwa ha nwoke, onye ha kpọrọ Davi Lucca da Silva Santos.
Akụkọ Neymar na Carolina Dantas.
Ọ bụ ihe nwute na ihe a na-atụghị anya ya nye ndị Fans, akụkọ ịhụnanya n'etiti Neymar na Carolina adịteghị aka. Onye na-acha ọkụ ọkụ na-agbawa nne nke nwa ya ogologo oge mgbe ọ mụsịrị Davi Lucca. Kemgbe ahụ, ha abụrụla enyi.
Ebe ọ bụ na ọ kwụsịrị mmekọrịta ya na 2011, Neymar ka ya na nwa ya nwoke nwere mmekọrịta dị mma. Ọ na -enyefe ego na Carolina Dantas kwa ọnwa maka idobe ha abụọ.
N'ịchọ imezu nkwa nna ya nke ọma, Neymar na -agba mbọ isonye na ndụ nwa ya oke o nwere ike.
Zute nwa Neymar - Davi Lucca.
Akụkọ ịhụnanya nke Neymar na Barbara Evans:
Naanị mgbe ọ hapụsịrị mmekọrịta ya na nne nwa ya (Davi Lucca da Silva Santos), Neymar gafere ngwa ngwa gaa nwa agbọghọ ọzọ.
Ọ malitere ịlụ Barbara Evans n'otu afọ ahụ na 2011. Agbanyeghị, maka ihe amabeghị, ịhụnanya ha kwụsịrị n'oge adịghị anya.
Neymar na Barbara Evans Storyhụnanya Akụkọ.
Akụkọ ịhụnanya nke Neymar na Carol Abranches:
N'agbanyeghị nke ahụ, na 2011 mgbe amụrụ nwa ya nwoke Davi Lucca, ọ gafere site na mkpakọrịta nwoke na nwanyị Barbara Evans gaa nwanyị ọzọ.
Oge a, Neymar malitere ịlụ Carol Abranches, onye Brazil na -agba egwu na onye na -agba egwu. Ha abụọ nwere ọ funụ mgbe ha na -akpa, a na -akọkwa na Neymar batara n'ime ya.
Neymar na Carol Abranches Love Akụkọ.
Ha kwenyere na ha ga -enwe mmeghe - nke ahụ ga -ahụ ka ha na ndị ọzọ na -akpachi anya mgbe ha ka na -eme mkpapụ.
Nke ahụ adaghị nke ọma na Neymar, dịka o mechara pụọ. Mgbe ha mebiri, Carol Abranches gwara ndị na -akwado ya na ya na ọtụtụ ndị nwoke na -eme enyi n'oge ya na onye egwuregwu bọọlụ.
Akụkọ ịhụnanya nke Neymar na Bruna Marquezine:
Mgbe ya na Carol Abranches gbasasịrị, Onye egwuregwu ahụ gara n'ihu, na -enwe olileanya na ọ ga -enwe mmekọrịta kwụsiri ike.
Otu ụbọchị, mgbe ọ na -eme ememme na Rio, Neymar zutere wee hụ Bruna Marquezine n'anya na mbụ. Ha malitere ịlụ site na 2012 ruo 2018 - n'agbanyeghị na ndị hụrụ n'anya apụla kemgbe oge ahụ.
Neymar na Bruna Marquezine Akụkọ Lovehụnanya.
Bruna na Neymar mebiri ugboro anọ n'ihi mmekọrịta dị anya na ebubo nke aghụghọ - site na onye na - agba bọọlụ.
Dị ka ya si kwuo, ibi n'èzí Brazil siri ike. Maka ịnọ ogologo oge a (na-aga n'ihu), Neymar fans nwere ike ịchọpụta na Bruna bụ naanị nwanyị ọ kachasị hụ ya n'anya. Onye ma, afọ 2018 nwere ike ọ gaghị abụ afọ nke ikpeazụ ha tisara.
Akụkọ ịhụnanya nke Neymar na Patricia Jordane:
Mgbe ya na Bruna Marquezine na-eme mkpa, ndị egwuregwu bọọlụ Ex Barcelona bidoro iso Patricia Jordane pụọ - ihe dị ka afọ 2013. N'afọ ahụ, ọ pụtara na mkpuchi nke akwụkwọ akụkọ na-ekpo ọkụ gbasara mmekọrịta ya na Neymar.
Neymar na Patricia Jordan Storyhụnanya Akụkọ.
Mgbe ọ nụrụ banyere ihe ha mere, Neymar gọnahụrụ ya, o mechara bụrụ okwu Patricia megide ya. N'ihi nke a, okwu ha kwuru na ọ bụ naanị ọnwa atọ.
Akụkọ ịhụnanya nke Neymar na Laryssa Olivera:
Ọzọ, ka ya na Bruna Marquezine nọ, Ex-Barcelona Superstar malitere iso Laryssa Olivera pụọ. Neymar nwere obere oge ya na ya - naanị ọnwa Disemba 2013.
Neymar na Laryssa Olivera Storyhụnanya Akụkọ.
Mgbasa ha metụtara n'ezie Laryssa, bụ onye gosipụtara na ọ na-eche ya oke. Ozugbo ha na-emekọrịta ihe, ọ malitere ikwu ihe ọjọọ banyere Neymar. Ọ dị oke njọ, na Neymar ga-agba ya akwụkwọ.
Akụkọ ịhụnanya nke Neymar na Thaila Ayala:
Mgbe mmekọrịta ya na Laryssa dara, ọ gafere na ihe nlereanya na onye na -eme ihe nkiri. Thaila Ayala sitere n'otu obodo ahụ onye ọkpụkpọ Barcelona mbụ.
Ọ bụ nwunye nwunye onye omee Brazil bụ Paulo Vilhena, onye ọ kwụsịrị alụmdi na nwunye ya n'afọ 2013. Na mbido 2014, ọ malitere ịlụ Neymar.
Neymar na Thaila Ayala Love Akụkọ.
Dị ka asịrị si kwuo, ya na Neymar jikọrọ aka na mbụ - mgbe nkewa ya na di ya. Mgbe ha abụọ malitere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ndị egwu nwere ike ịhụ ka ndị nche na -echebe ha ebe niile.
Ha riri oriri n'otu nnukwu ụlọ oriri na nkwari abalị, nwee ọ enjoyụ n'ụsọ osimiri dị iche iche, ma nwee ọmarịcha ntụrụndụ abalị na Ibiza. Maka ihe amabeghị, Neymar mechara kwụsị mmekọrịta ha.
Akụkọ ịhụnanya nke Neymar na Elisabeth Martinez:
N'agbata afọ 2014 na 2015, ọ malitere iso onye ọka iwu Spanish bụ nnukwu onye na -akwado Barcelona.
A hụrụ Neymar na Elisabeth Martinez na -eleta ọtụtụ ụlọ oriri dị oke ọnụ, n'ụgbọ elu nke ya ma na -enwekwa oge kacha mma n'ụlọ oriri abalị (Opium na Sutton) na Barcelona.
Neymar na Elisabeth Martinez Love Akụkọ.
Akụkọ ịhụnanya Elisabeth na Neymar dị mkpụmkpụ. Ha malitere ịlụ na njedebe nke 2014 wee kwụsị mmekọrịta ha na Jenụwarị nke 2015.
Akụkọ ịhụnanya nke Neymar na Janin Ullmann:
Onye egwuregwu bọọlụ ahụ nọrọ nwayọ ọnwa ole na ole tupu na mgbe ọ gafesịrị ndekọ ya na PSG - naanị inwe enyi nwanyị ochie Bruna Marquezine laghachiri na ndụ ya tupu ha akwụsị ọrụ ọzọ.
N'oge ya na Paris, Neymar malitere mkpakọrịta nwoke na nwanyị Janin Ullmann, onye ọbịa TV, onye nta akụkọ na onye na -emepụta ihe.
Neymar na Janin Ullmann Akụkọ Akụkọ.
Janin Ullmann, onye na -egosi ihe onyonyo nke German, ji afọ iri tọọ Neymar. Di na nwunye na -anọkọ ụbọchị Valentine 2020 ọnụ ma hụ ka ha na -aga ọtụtụ oriri. Ha abụọ kwụsịrị mmekọrịta ha na June 2020.
Akụkọ ịhụnanya nke Neymar na Natalia Barulich:
N'ihe dị ka Ọgọst 2020, akụkọ mgbasa ozi gbakọtara na onye mmeri Champions League nke PSG amalitela ime ihe nlereanya Croatian-Cuba.
Neymar na Barulich mara ibe ha dịka enyi n'oge otu ụbọchị ọmụmụ ya gara aga, ebe enyi ya nwoke (onye Colombia na-agụ egwú Maluma) mere.
Neymar na Natalia Barulich Storyhụnanya Akụkọ.
Mgbe 2019 kewara nwoke ya, Barulich malitere ịkọrọ Neymar site na mgbasa ozi mgbasa ozi ya. Fans hụrụ na ha bidoro ịlụ nwoke na nwanyị mgbe o sere foto ya na Neymar nwere ihe odide ahụ;
“Onye ọ bụla maara otú Ikike gị bụ, ma ọ bụrụ na ha nwere ike na-ahụ otú ezigbo & mma ị bụ n'ime obi gị. Na-akwanyere Bebe ùgwù niile. ”
N'oge ederede Biography nke Neymar, Natalia Barulich nwere ọnọdụ nke enyi nwanyị ya ugbu a. Mmekọrịta ya ọ ga-adịte aka karịa nke Bruna Marquezine? Naanị oge ga-agwa.
Winger flashy bụ nkọwa doro anya nke "ndụ okomoko". Neymar enweghi nani ihe kacha mma; ọ na-enwe mmasị igosi ha. Akụkụ nke a Biography na-enyocha ndụ ya. N’etughi oge, ka anyi bido.
Nchịkọta ụgbọala nke Neymar:
Onye egwuregwu bọọlụ mara mma bụ onye nwere mpako nke Aston Martin Vulcan ($ 2.3 nde), Maserati Mc12 ($ 1.47 nde), Ferrari 458 Italia ($ 407,234) na Mercedes AMG ($ 188,100) wdg.
Ndị a bụ ole na ole n'ụgbọ ala Neymar dị ka ọ dị. Vidiyo dị n'okpuru na -ekpughe mkpokọta ụgbọ ala ya.
Ọ zụtara ya na 2012 maka nde euro 3.5 dị jụụ. Ụgbọ mmiri Neymar bụ ihe nlereanya Azimut 78. Ọ dị mita 25 n'ogologo, nwere ọnụ ụlọ ime ụlọ, ime ụlọ atọ, sofas dị mma maka asatọ, kichin na ihe mkpuchi arụnyere n'ime ya.
O nyere Yacht aha “Nadine” iji sọpụrụ nne ya. Nke a bụ vidiyo nke Neymar na -anụ ụtọ ọmarịcha ụgbọ mmiri ya.
Superstar zụtara ya $ 15 nde, ọ bụ Mercedes Benz rụrụ ya. Ị maara?…
Ọ dekwara mkpụrụedemede ya - na agba ọcha. Nke a bụ vidiyo nke etu o si enwe helikopta ya.
Ozo nke Neymar:
Ụgbọelu ahụ bu akara aha ya bụ “NRJ,” ọ bụkwa Helicopteros nke dabeere na Brazil na-elekọta ya. Neymar's Embraer Legacy 450 Private Jet nwere ike kpuchie ruo kilomita 531 n'otu awa ma ọ dịkarịa ala itoolu nọ n'ụgbọ.
Dabere na TheSun, ọ furu £ 10.8 nde iji nweta ụgbọ elu nke ya. Nke a bụ vidiyo gbasara ụgbọ elu Neymar.
Lọ Neymar (Mans) na Brazil na Paris:
Na France, ọkpọ na-enwu enwu na-ehi ụra n'ime ụlọ elu ya dị £ 6.5m-10,800 square square dị na Bougival, ọgbakọ dị na ọdịda anyanwụ Paris Paris. Ọ na -ebikwa n'ụlọ nde £ 7m na Brazil.
Ngwongwo a dị oke ọnụ dị na mpaghara Mangaratiba, na steeti Brazil nke Rio de Janeiro. Nke a bụ njegharị vidiyo nke ụlọ Neymar na Paris na Brazil.
Anya aka nke Neymar:
Ndị na-agba ọsọ ejiji nwere nnukwu agụụ maka elekere GaGà Milano. Dabere na Business Insider, ọ na-etinye $ 180,000 na nche n'otu ụbọchị na GaGà Milano Boutique na Tokyo. Lelee vidiyo nke oge mbinye aka Neymar.
Ndụ nke onwe nke Neymar:
N'ebe a, anyị na-ekpughere gị eziokwu banyere ụdị onye ọ bụ. Ikekwe ị pụrụ ịjụ; Ewezuga bọọlụ, onye bụ Neymar? Tomata ụdị ndụ ọ ga-enyere gị aka ịghọta ya nke ọma.
Tomata Ndụ nke Onwe Neymar.
Nke mbụ, ọ bụ ezigbo enyi mmadụ, onye na-abụghị naanị ọchị ma na-achọghị ịma ihe ndị mmadụ na-eche banyere ya.
Neymar na-ahụ n'anya ibi ndụ obi ụtọ. Anyị nwere vidio gosiri na ọ dị egwu n’ihe gbasara ịbụ abụ.
Neymar gosikwara na ya nwere ike ịgba egwu n'ihu ezigbo igwe mmadụ. Ndị bịara egwu egwu a nwere ihu ọma, ọ bụ naanị ndị na -ahụ maka egwuregwu bọọlụ nwere ike inwe MEGA nostalgia maka abụ a o sonyere.
Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị nweghị uru ọ bụla, chee maka igwe okwu Neymar na vidiyo dị n'okpuru.
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, Neymar bara uru yana ezigbo ntọala. Ọ bụ onye na -eche na ọ dị mkpa ka ịhụnanya na ụmụ nwanyị mara mma gbaa ya gburugburu, ọkachasị mgbe ọ na -eme ncheta ọmụmụ ya. Nke a bụ vidiyo otu n'ime emume ncheta ọmụmụ Neymar.
Ndụ Ezinụlọ Neymar:
Mgbalị ịghọta “ihe nzuzo” nke ezinụlọ bara ọgaranya na -amalite site n'ịmụ na ịghọta nke ahụ sitere na onye Brazil.
Akụkụ nke akụkọ ndụ anyị na -eme ka ndị ezinụlọ Neymar ghọtakwuo - malite na nne na nna ya.
Banyere Nna Neymar:
Nna Neymar bụ ọkachamara na Mkparịta ụka nkwekọrịta. Ọ bụkwa ogidi nke uto nwa ya na ọdịmma mmetụta uche ya.
Amụrụ na 7th nke February 1965, Pundits na-ele ya anya dị ka Puppet Master n'azụ nnukwu nnukwu ihe nwa ya nwoke na-eme. Hụrụ nwoke a?… Ọ bụ onye isi nke nnyefe ndekọ ụwa son 222m nwa ya nwoke.
Neymar Santos Sr enweghị ọrụ ọzọ karịa ijikwa ihe omume nwa ya nwoke. Nna nke ọrụ abụọ dị ka onye nnọchianya nke nwa ya, nke ahụ emewokwa ka ọ baa ọgaranya.
Na ọkachamara na ndekọ onwe onye, ​​ọ dịghị ahapụ Neymar. Ọkachamara ya duziri nwa ya nwoke nke kpakpando n'elu. Ndekọ ọnụ ọgụgụ na-ekpughe na nna na nwa jikọtara ịbụ ndị ọgaranya dịka azụmahịa azụmaahịa metụtara.
Site na ihe ịga nke ọma, Neymar Snr enwetala oke nkatọ ya, ụfọdụ n'ime ya bara uru. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ nnabata ebilitela site na anyaụfụ nke ịrị elu ya na ịda ogbenye na akụnụba na-enweghị atụ.
Akara nke nna Neymar ga-anọgide n'ime ya ruo mgbe ebighị ebi.
Mgbe ị na-eche maka ndị Nna na Smụ na azụmaahịa football, tụlee ndị Neymars. Mmekọrịta dị n'etiti ndị a abụrụla ihe dị mkpa maka ọganiihu ezinụlọ ha. N'ihi ya, ọ bụghị ihe ndabara na ọ na-eyi Neymar Jr n'azụ uwe elu ya.
Uzo ọ bụla nke ụzọ, Junior nwere nna ya, Neymar Santos Sr., na-ele anya n'azụ ya. Nke a bụ vidiyo nke otu n'ime oge ahụ a na-apụghị ịgụta ọnụ.
Ọ nweghị ihe nwere ike ịkwụsị Neymar Sr kemgbe ihe mberede ahụ mere. O mere ka nwa ya bụrụ isi ndụ ya. Agbanyeghị, ụfọdụ ekwuola na ụzọ ya na -abụkarị arụmụka.
Mana Neymar Snr na -elekwasị anya na ime ihe niile iji hụ na nwa ya nwoke ghọrọ onye egwuregwu bọọlụ kachasị nwee mmeri n'ụwa.
Banyere mama mama Neymar:
Obi abụọ adịghị ya, ma nne ma nwa nwoke nwere njikọ pụrụ iche.
Enweghi oke okwu iji kọwaa mkpa Nadine Goncalves bara na ndụ Neymar. Amụrụ na 19th nke Eprel 1967 na-egosi na ọ dị afọ 54 na ọnwa 8.
Nne Neymar, Nadine Goncalves, lụrụ Neymar Santos Sr na 1991. Agbanyeghị, afọ 25 nke alụmdi na nwunye na-aga nke ọma kwụsịrị mgbe di na nwunye ahụ kewara na 2016.
Ndị na-agba ọsọ Brazil na-akpachi anya na nne ya tupu ya agbaa alụkwaghịm na papa ya. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-akpọrọ ndị enyi ha nwanyị na Parties, Neymar Jr mere nke ahụ. Ọ na-akpọ nne ya oriri.
Neymar na-enwe oriri na mama ya, Nadine.
Dabere na kpakpando PSG,
“Mama m bụ akụkụ buru ibu nke ezinụlọ m. Ọ bụ ụdị onye, ​​na-enweghị ya, anyị ga-efu. Ọ na-akwado anyị. Mụ na nne m dị n’ezigbo mma mgbe nwanne m nwanyị nọ na kọleji, papa m na-agagharịkarị.
N'oge na-adịbeghị anya ụwa hụperetụ akụkụ dị nro nke Neymar na vidiyo na-enye obi ụtọ banyere egwu ịgba egwu ya na nne ya. Lelee ihe ngosi nke ịhụnanya na-enweghị atụ ebe a.
Banyere Nwanne nwanyị nke Neymar, Rafaella Beckran:
A mụrụ naanị nwanne ya na 11th nke March 1996, nke pụtara na ọ bụ 25 afọ na ọnwa 10. Neymar nwere ezigbo nwanne na nwanne ya na Rafaella.
Site na mmalite, ọ bụ onye na-anaghị esiri ya pụọ ​​n'anya ya. Pladị nso nso a mere ka ọ gbaa egbugbu ihu ya na ogwe aka ya, ebe Rafaella, na nloghachi, tụrụ anya nwanne ya nwoke na aka ya.
Site na otu ubochi, enwere ezigbo nwanne na nwanne n'etiti Neymar na nwanne ya nwanyi, Rafaella.
N'agbanyeghị afọ ole ị dị, mgbe gị na ụmụnne gị nọ, ị ga-alaghachi n'oge ị bụ nwata. Nke a bụ ihe gbasara Neymar na Rafaella.
Nwanna Na-echebe Nchebe:
Ị maara?… Ọ bụrụ na ndị mmadụ na -abịaru Rafaella nso, Neymar nwere ike tufuo ya. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ Ultra-echebe ya.
N'otu oge, onye egwuregwu bọọlụ Brazil Dani Alves gwara TV Globo gbasara nwanne enyi ya. N'okwu ya;
Otu ụbọchị, na 2015, ndị egwuregwu ibe kwuru banyere nwanne nwanyị Neymar n'ime ime ụlọ mkpuchi. N'okwu ha: F * ck, nwanne gị nwanyị mara mma, ọ bụghị ya?!
Neymar nwere oke iwe na oke ekworo na nke ahụ. Okwu ndị ahụ mere ka Neymar kwụsị ya.
Nkwupụta a gosipụtara otú o si echebe ya. Kemgbe ụbọchị ahụ, Ọ jụrụ ịhapụ ndị otu ya ka ha bịakwute ya ọzọ.
Ndị na-agba ọsọ ụkwụ ghọrọ Rafaella's Boyfriend:
N'agbanyeghị mgbochi Neymar, otu onye otu ndị otu Brazil gbalịrị inwe obi ọma n'ebe nwanne ya nwanyị nọ. Ọ bụghị onye ọzọ Gabriel Barbosa, AKA Gabigol.
Idupu Rafaella na 2017 dị ka ịkpọpu mma n'obi Neymar na nna ya.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị Rafaella na-enweghị nkwenye ha ka akpọrọ enweghị nkwanye ùgwù nye Neymar na nna ya.
Mmekọrịta dị n'etiti Gabigol na Rafaella akwụsịghị, na nkwụsị ha siri nnukwu ike. N'ezie, nke ahụ hapụrụ Neymar na papa ya nwere obi ekele.
Otu ụbọchị, ka ọ na-apụ n'ụlọ ịgba egwu abalị, papa Neymar lụrụ ọgụ megide Gabigol. O mere ka ndị na-agba ama mara na ya enweghị ọnọdụ n'ezinụlọ ya.
N'ụzọ dị ịtụnanya, Rafaella laghachiri na Gabigol na 2019. Site na nke a, o gosipụtara na ikike nna ya anaghị arụ ọrụ na ụmụ ya niile.
Ọ dị ka ọnweghị onye nwere ike ịkwụsị Gabigol na Rafaella n'oge a.
Ihe mere Rafaella ji gbanwee aha nna ya na Beckran:
N'ikwu eziokwu, a ka nwere otu onye ọkpụkpọ (ọzọ) na-akpali Rafaella. Ọ bụghị onye ọzọ David Beckham. Onye bụbu onye bọọlụ England bụ ihe kpatara o jiri gbanwee aha ya site na Rafaella Santos ka ọ bụrụ Rafaella Beckran.
Mgbanwe a bụ maka ịhụnanya o nwere maka onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ England. Maka nke a, Neymar na papa ya ekworoghị n'ihi agwa Beckham.
Dị ka enen TalkSport, enwere ike ịdị na akụkọ mgbe ochie nke England na Neymar nwere ike ịzụ ahịa n'ọdịnihu.
Banyere ndị nne na nna ochie Neymar:
Postermụ football ga-echezọ nwanyị a maka ọrụ ya mgbe ezinụlọ nwa ya nwoke tara ahụhụ site na nnukwu ihe isi ike.
Ọ bụrụ n’icheta, ezinụlọ Neymar kwagara ebe ya mgbe ha nwere nsogbu akụ na ụba, n’enweghị ego iji kwụọ ụgwọ ọkụ eletrik. Ọ bụ n'ụlọ ya ka Neymar papa, mama, ya na nwanne ya nwanyị dinara akwa.
Nne nne Neymar nwere ike ịbụ agadi, mana ọ ka siri ike ma jupụta na ndụ. Nke a bụ vidiyo nke Neymar na-enwe Snapchat ya na nne nne ya. Nkịta ngwa ngwa ahụ mara mma na ya.
Neymar Untold Facts (Ndị Na-abụghị Ọrụ):
Akụkụ nke akụkọ ndụ anyị na-agwa gị ihe niile gbasara Brazil n'ihe gbasara ndụ ya na football. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Eziokwu # 1 - Banyere enyi nwoke mama mama Neymar:
Neymar nwere nzọụkwụ papa nke dị afọ ise karịa ya.
Tiago Ramos bụ aha ya, ọ gbara afọ ise karịa Neymar. Ọ bụ onye na -egwu egwuregwu na onye nlereanya nke kụrụ isi akụkọ ụwa niile mgbe ọ malitere ịlụ nne Neymar, Nadine Goncalves.
Na mgbakwunye na ọrụ ya, amaara ya maka ịgba egwu ya, dị ka edere na vidiyo dị n'okpuru.
Dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Brazil si kwuo, Tiago Ramos bụ nwoke idina nwoke. Tupu ya na Nadine akpakọrịta, ya na onye na -esi nri Neymar Mauro na onye ndụmọdụ, Irinaldo Oliver nwere mmekọrịta mbụ.
Enwere akụkọ na -emegiderịta ma Tiago Ramos ka ya na nne Neymar na -apụ.
N'otu oge, Nzọụkwụ Neymar kwuru na ụfọdụ ụmụ nwoke makpuru ya n'ụlọ oriri na ọ Mexụ Mexụ Mexico. O kwusiri ike na ndị iro ahụ buru ụzọ mee mwakpo ahụ. Lelee vidiyo n'okpuru.
Eziokwu # 1 - Ihe nke Neymar pụtara Ogbugbu:
Ihe osise a na-ahụ anya nke ọma bụ ihe osise nke nwanyị n'akụkụ aka nri ya. Jehova bụ nne ya ọ hụrụ n'anya, Nadine Santos. N'agbanyeghị nke ahụ, na aka nri ya, e nwere egbugbu nke nwa ya nwoke, Davi Luca.
N’akụkụ aka nri nke obi Neymar, egbugbu gụrụ, “Toda arma… E toda língua… Bola que é sua… Que não é sua…"
Mgbe a jụrụ ya banyere egbugbu ahụ, Neymar kọwara na ọ bụ okwu ịhụnanya na nchebara echiche maka papa ya, nke ọ na-ekwu mgbe niile tupu ya agaa egwuregwu ọ bụla.
Aka ekpe Neymar nwere egbugbu nke ihu ọdụm. Ihe osise a na-egosipụta eziokwu na ọ dịghị atụ egwu. Ọ na-egosipụtakwa ikike ya iji merie nsogbu site na obi ike na obi ike.
Akụkụ aka ekpe nke Neymar nwere egbugbu nke obere nnụnụ atọ na-efe efe - yana okwu ndị a; “Tudo Passa“. Okwu ndị a na-egosi na ọ nweghị ihe ga-adịgide, dị ka otu nnụnụ na-agaghị anọ otu ebe.
Ọzọkwa, azụ azụ nke olu Neymar nwere egbugbu nke obe nwere nku. Ọnwụ ahụ na-anọchi anya echiche okpukpe ya. Enwekwara egbugbu ya di ngo nke bu ngozi nke oru ya site n’aka Chineke.
N'ikpeazụ, mgbe ọ nọ na PSG, Neymar kpebiri iji azụ ọhụrụ nke Ududo-Man na Batman chọọ icho mma n'azụ. Ọnwụ ahụ bụ ụtụ maka ihe odide egwuregwu kachasị amasị ya n'oge ọ bụ nwata. Neymar nwetara mmụọ sitere n'aka ndị dike a.
Eziokwu # 2 - Okpukpe Neymar:
Ọ bụ Onye Kraịst Pentikọstal nke kọrọ na ya na-akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri ya. Neymar na-enye ụka 10% nke ego ya.
Site n'oge ọ bụ nwata, okpukpe abụwo akụkụ dị mkpa nke ndụ ya na nkà ihe ọmụma ya. Neymar kwenyere na ndụ na-enwe isi mgbe ebumnuche anyị kachasị elu bụ ijere Jizọs Kraịst ozi.
Tụkwasị na nke ahụ, ndị na-agba ọsọ n'okpukpe ejiriwo ihe mkpuchi isi kemgbe ọ bụ nwata, nwere okwu "100% Jesus". N'ikpeazụ, Kaka bụ ihe nlereanya ime mmụọ nke Neymar.
Eziokwu # 4 - Neymar Mmeko Akụkọ:
Na July 2019, Najila Trindade na di ya, Estivens Alves, nwara imebi PSG winger.
Okwu ebubo Neymar na-eme n'ike n'ike bidoro mgbe ndị ọgba bọọlụ zutere Najila n'ịntanetị, kwụọ ụgwọ maka ya njem ọ gara France wee hụ ya n'anya na họtel. Mgbe ọ laghachiri Brazil, Najila gakwuuru ndị uwe ojii kọọrọ na Neymar dinara ya n'ike.
Neymar wepụtara vidiyo nkeji asaa na Instagram iji gbachite ọnụ ya, na-ekpughe na e boro ya ebubo ụgha maka mmeko nwoke n'ike.
O bipụtakwara ozi Whatsapp na onyonyo nke o kwuru na ọ bụ nke nwaanyị. Nke a bụ vidiyo ebe ọ gọrọ ebubo ebubo mmeko nwoke n'ike.
Obi dị anyị ụtọ na ndị uwe ojii kwupụtara na ha ga-akwụsị nyocha mmeko nwoke megide Neymar n'ihi enweghị ihe akaebe zuru oke.
Ka oge na -aga, ihe akaebe ọhụrụ na -akwado Neymar na -egosi Najila Trindade, nwanyị nke boro Neymar ebubo mmeko nwoke, ka a na -ese vidiyo maka ibute ya ụzọ n'ime ụlọ nkwari akụ.
Vidiyo ahụ, dị ka anyị nwere n'okpuru, gosipụtara na ọ nweghị ihe mere n'ezie.
Eziokwu # 5 - Ihe nkiri Neymar:
N'ime afọ ole na ole gara aga, enweela mmụba n'ọnụ ọgụgụ ndị egwuregwu na -eme ihe nkiri na fim. Neymar Jr bụ otu n'ime ha.
Ebe ọ bụ na 2012, onye ọkpọ ahụ na -amali elu na fim na usoro TV dị ka Encanador, Nlaghachi nke Xander Cage na Ego Heist wdg. Lee ntakịrị ihe nkiri Neymar.
Neymar Untold Facts (Ọrụ):
Akụkụ mmechi nke Bio ya gosipụtara anyị eziokwu ndị metụtara ndụ ọkachamara ya. Na-enweghị igbu oge gị, ka anyị gaba.
Eziokwu # 1 - Nkọwa Neymar's PSG Salary na Nkezi Citizen:
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Neymar's Bio, nke a bụ ihe ya na PSG rụpụtara.
Neymar's PSG Salary na Euro (€)
Neymar's PSG Salary na Dollar US ($)
Neymar si PSG Salary na Pound (£)
Kwa Afọ € 36,800,000 $ 43,861,552 £ 31,489,145
Kwa ọnwa € 3,066,666 $ 3,655,129 £ 2,624,095
Kwa Izu € 706,605 $ 842,195 £ 604,630
Kwa ụbọchị € 100,943 $ 120,313 £ 86,375
Oge Awa obula € 4,205 $ 5,013 £ 3,599
Nkeji ọ bụla € 70 $ 83 £ 60
Sekọnd ọ bụla € 1.17 $ 1.4 £ 0.9
Know maara? Average nwa amaala nọ na France na-enweta euro 49,500 kwa afọ ga-achọ afọ 14 na ọnwa 1 iji mee ihe Neymar na-anakọta kwa izu na PSG.
Eziokwu # 2 - Neymar Profaịlụ (FIFA):
Onye Brazil, dị ka Mohammed Salah, na-egosipụta izu okè n’usoro ije na nka. Uche ya di nma dika nke Robert Lewandoski. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ nọgidere bụrụ nhọrọ kachasị mma maka ndị na-egwu egwuregwu FIFA.
Nanị ihe mmachi Neymar nwere n'egwuregwu ahụ bụ nnabata ya, ike ya na mwakpo ya. Speed ​​dribbler nwere ntụpọ ma a bịa na imeri ihe ịma aka anụ ahụ.
Ọ nwekwara oge dị egwu ma a bịa n'isi okwu na mgbaru ọsọ. Agbanyeghị, ọ nwere ụkpụrụ FIFA dị egwu.
Neymar's Life Story malitere na Mogi das Cruzes, nke dị nso na São Paulo. Na obodo a, ọ nwetara ụbọchị na akara aka. Ọ bụ ebe ya na papa ya kpebiri na football ga-abụ akụkụ dị mkpa nke ọdịnihu ezinụlọ ha.
Ighaji ọkpụkpụ úkwù ya site na ihe ọghọm mechiri ọrụ papa ya. Nke ahụ egbochighị Mr Santos ịlụ ọgụ maka ibi ndụ ka mma maka ezinụlọ ya. Site n'enyemaka ya, Neymar nwetara nkwado n'oge ọ bụ nwata ma mezuo ebumnuche ndụ ya.
Anyị niile maara na onye Brazil na -emerụ ahụ oge niile. Agbanyeghị, Neymar bụ onye na -anaghị emechu ihu mgbe ọ si na mmerụ ahụ lọta.
N'ime ọtụtụ afọ, ndị egwuregwu bọọlụ na -amasị Gareth Bale na Eden Hazard dapụrụ n'ụwa mgbe ị na-emeso mmerụ ahụ. Neymar akwagidela ike ya.
Eziokwu bu, ma oburu na odighi Lionel Messi or Cristiano Ronaldo na Neymar enweghi mmerụ ahụ, ọ gaara abụ ndị egwuregwu kachasị mma n'ụwa - ọ bụghị otu oge. Ọ bụ naanị oge ka ị hụ ma ọ ga - enwe ike ịpụ n'etiti kpakpando ndị na - eto eto - Kylian Mbappe na Erling Hallland iji merie Ballon d'Or mbụ ya.
Ọ dị anyị mkpa ịja ndị nne na nna Neymar mma - Nadine Santos na Neymar Santos Sr maka ịrapara n'ahụ ya n'oge oke na mkpa. Rafaella (nwanne ya nwanyị) ka bụ otu n'ime isi mmalite nke ike ya. Oge nke ịnọgidesi ike n’ezinụlọ na enweghị ọkụ eletrik agaala nke ọma.
Daalụ maka ịgụ Biography nke otu n'ime ọla kacha mma dị na Brazil. Anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ mgbe anyị na-anapụta Akụkọ Ndụ nke ndị egwuregwu bọọlụ Brazil.
Jiri nlezianya mee ka anyị mara ma ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na ncheta anyị banyere Neymar. Ma ọ bụghị ya, ka anyị kwuo uche gị banyere ihe anyị dere na Junior's Bio.
Tebụl dị n'okpuru na-enye nchịkọta nke Neymar's Biography.
Aha n'uju: Neymar na Silva Santos Júnior
Aha otutu: Juninho, Joia, na Chineke nke Abali
Ụbọchị ọmụmụ: 5 February 1992
Ebe amụrụ onye: Mogi das Cruzes, Obodo na Brazil
Ndị nne na nna: Neymar Santos Sr (Nna) na Nadine Goncalves
Nwanne: Rafaella Santos ugbu a Rafaella Beckran
Nwa: Davi Lucca da Silva Santos (Nwa)
Ezigbo Net: $ 236 Nde (2021 stats)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: € 36,800,000 (PSG)
Religion: Iso Christianityzọ Kraịst (Pentikọstal)
Ihe akara Zodiac: Aquarius
elu: 1.75 mita ma ọ bụ 5feet 9 sentimita asatọ
arọ: 68 kg
neymar jr ga-achọta n'ezie na madrid na 2019 na ọ ga-ele anya na bọtịnụ ma ọ bụ na ụwa na-amasị ya na nwa ya nwoke ma na-achọ ịghọ nwa obere nwa